March 2013 - सिसाकलम ब्लग
दुई जिउकी !
by Nepali Caricature at 21:000प्रतिकृया
मिल्न थालेका कुरा ।
केही दिन यता नेपाली राजनीतिमा फेरी उल्का हुन थालेको छ । कुन्नी कुन बुटीले काम गर्‍यो, चार दल अर्थात चार शक्ती बिच भटाभट कुरा मिल्न थालेका छन | दलहरुको यस्तो मिल्ती देखेर दुनियाँ चकित छ । अब त एउटा नेताबाट कुनै प्रस्तव भुइमा खस्न पाएको छैन फ्याट फ्याटी कुरा मिलिहाल्न थालेको छ । त्यसैले असम्भव, नमिल्ने र नहुने भनेको कुरा यस धरती बाट लोप हुने कुरामा छ ।
चार दल बिच बसेर यसो कुरा के भएथ्यो, प्रधान न्यायधिसको नेत्रित्वमा चुनावी सरकार बनाउने कुरामा सहमती भैहाल्यो । चार दल एक मुख हुनासाथ सम्पूर्ण कानुनी र संबैधानिक जतिलटाहरु चमत्कारीक ढंगले भत्किए र उहा सर्बोच्चबाट सिम्हदरवार सजिलै पस्नु भो । यता सर्बोच्च बाट सर चै निस्केर सिम्हदरवार पस्नु भएकोले त्यता चै बुच्चा मात्रै बाँकी रह्यो । तर बुच्चिनु नबुचिनुमा के मतलव । दलहरु बिच नै कुरा मिलि सकेपछी ।
त्यस्पछी अब कुरा आयो मन्त्री बनाम्ने । यस प्रकृयामा पनि दलहरु बिच मजैले कुरा मिल्न थाले । त्यस भन्दा अघी पनि उनीहरुले अर्को कुरा मिलाए । सरकार सन्चालन गर्न उनिहरुले आफुहरु बिचबाट "बोर्ड अफ डाइरेक्टर" बनाए । र बोर्ड अफ डाइरेक्टरले धमाधम डिसिजनको काम अघी बढायो । यसमा चमत्कार स्प्रिट लाई कायमै राख्ने अघोसित सहमती भयो । अब मुलुकमा जनताको लागी जेलनेल खाएर कपाल फुलाएका नेता होइनन । आफ्नै लागी जागिर खाएर कपाल फुलाएका रिटायर्डहरु मन्त्री हुन थाले । अब रिटायर्डहरु फुनको घन्टी बज्नासाथ कुदेर गएर ऐनामा आफ्ना पुर्पुरो पढ्न थालेका छन । जा जा बुढी झट्टै लबेदा सुरुवालमा आइरन लागाइदे भनेर अह्राउन थालेका छन । यी सप्पै कुरामा चार शक्तीको कुरा मिल्न थालेको छ ।
by Nepali Caricature at 20:190प्रतिकृया
विधा : लेख / ब्यङ्य, व्यङ्ग्य
एकादेशमा चार राजनीतिक दल थिए । तिनीहरु चार राजनैतिक शक्तिले चिनिन्थे । उनिहरु नेपाल देशको काठमाडौँ नगरमा बस्दथे । उनीहरुको जागिर सहमती गर्नु थियो । नेपाल भन्ने त्यस देशमा सरकार, प्रधानमन्त्री, संबिधान, चुनाव आदी सबै सहमती फेक्टरी बाटै उत्पादन हुन्थे । ति चार सक्तीहरु त्यहि प्रडक्सन सेक्सनमा खटिएका थिए । र जोडतोडका साथ सहमती गर्ने ड्युटीमा खटिएका थिए ।
समय बेग रफ्तारमा कुद्दै थियो । सहमतीको उत्पादन त्यति राम्ररी हुन सकिरहेको थिएन । उता सितल निवासबाट डक्टरसापले च्याप्दै लगे । त्यसपछी उनिहरु कसरी सहमती बनाम्ने भन्ने घनिभूत छलफलमा लागे ।
अब छलफल गर्न त बस्नै पर्यो । कुरो आयो अब को कता फर्किएर बस्ने ?
माउबादीले भन्यो -" हामी त दक्षिण ज्यान जाला फर्कन्नम । दक्षिण तिर फर्केर हामी दक्षिणपन्थी हुन चाहान्नौ ।"
"अनि को बस्छ त ?"
काग्रेसले सोध्यो - "एमाले बस्ने हो ?"
"हामी दक्षिण फर्किन्नम |"
एमालेले भन्यो ।
by Nepali Caricature at 22:440प्रतिकृया
कुखुरा पैले जन्म्यो की फुल पहिले ?
by Nepali Caricature at 19:580प्रतिकृया
by Nepali Caricature at 20:440प्रतिकृया
विधा : आर्थिक कार्टून, सामाजिक कार्टून
हाम्रा, राम्रा र चाम्रा प्रधानमन्त्री
मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री सग जनताका बिबिध अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । कसैले नया प्रधानमन्त्री भएसी शान्ती सुरक्षेमा ध्यान दिउन भनेर आसा गर्छन । कसैले यो महंगी अन्त्य गरुन भनेर आसा गर्छन । कसैले बाटो बढाइदिए गज्जप हुन्थ्यो भनेर आसा गर्लान त कसैले जनतालाई तत्काल राहत दिउन भन्ने अपेक्षा गर्लान । अझ प्रधानमत्रीको नजिककै कोहि छन भने तिनले प्रधानमन्त्रीले ब्यक्तिगत लाभका काम गरिदिउन भनेर आसा राख्छ्न । उनले ठेक्का पारीदिउन । कुनै ठाममा नियुक्ती मिलाइदिउन भनेर आसा गर्ने हरु पनि धेरै हुन्छ्न । त्यसो त सबोच्च अधालतबाट जन्मकैद पाएकाहरु आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री बन्दिए उम्किने आसा गर्छन ।
यि अपेक्षाहरुको भिडमा कुन अपेक्षा चै प्रधानमन्त्री माथी ज्यादा होला ? जब कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ्न तब अधिकाम्स मानिस हरुको प्रधानमन्त्री सग माग के हुन्छ ? बत्तिको पनि स्वास्थ्य संचार कि बाटोघाटो ? सोच्नु होला यस्तै होला भनि ।
तर प्रधानमन्त्री सग अधिकांस मानिसले माग्ने र आस गर्ने कुरा अलि बेग्लै छ । जुन सधै सुनिन्छ नै । त्यो हो -"राजीनामा । " यहा प्रधानमन्त्री सग सबैभन्दा मागिने कुरा । सबैभन्दा धेरै मान्छेले अपेक्षा गर्ने कुरा भएको छ - "राजीनामा ।" प्रधानमन्त्री सग धेरै मान्छेले धेरै कुरा माग्लान । तर बहुमत मानिसहरुले राजिनामा नै माग्छन जहिले पनि । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बहादुरी भनेको के के काम गर्न सके । रास्ट्रीय चासोका बिसयमा जनचासोका बिसयमा उनका अडान कस्तो रह्यो । मुलुकको हितमा उनको आवाज कतिको लाउड रह्यो भन्दा पनि तिब्र राजिनामाको मागको बिचमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आफ्नो टाङ् मुनि राख्न सक्षम भयो त्यसमा देखिन थालेको छ ।
by Nepali Caricature at 08:250प्रतिकृया
by Nepali Caricature at 17:300प्रतिकृया
विधा : प्रचण्ड, राजनीतिक कार्टून
चुल्ठे मुन्द्रे |
मुलुकाँ अहिले प्रहरी प्रशासन अपराधीहरुको जरो किलो उखेल्ने अभियानमा लागेको छ | र त्यसको लागि उसले जरोकिलोको पहिचान गरिसकेको छ । र धमाधम अप्रेसन सुरु गरेको छ । प्रहरीले जरोकिलो कपालमा फेला परेको छ र धमाधम मुण्डन अभियान सुरु गरेको छ । कपाल पालेको मान्छे देख्यो कि च्याप्प समात्दै भ्यानमा कोच्दै लाँदै कपाल खुइलायाम्दै पठाउदै गरेको देख्दा यस्तो लाग्छ कि अबको केही दिनमा नेपाली समाजमा अपराध भन्ने कुराको नामोनिशान नै रहने छैन । र जनरल गेहेन्द्र सम्सेरले बनाएको तोप हेर्न छाउनी संग्रालय गए जस्तै अपराधीको अन्वार हेर्न नि जेल जानु पर्ने हुन्च ।
त्यसो त गुण्डाहरुको पत्तासाफ गर्न प्रहरीले उहिल्यै देखी प्रयास नगरेको हैन । तर पनि कुनै न कुनै ठाममा चुकुल खुस्की हाल्ने । गुँण्डाजी उम्कीहाल्ने । जे जे गर्दा नि उम्किहालने भएसी गृह प्रशासन लाइ परेसान भएछ । जस्तै कडा कानुन ल्याए नी जस्ता कडा कदम चालेपनी गोबरका मुला जसरी गुण्डाराज मौलाएको मौलाएकै छन । निएम कानुन को त बाल छैन । क्याहो यस्तो ? भनेर सोच्दा सोच्दै प्रशासनको आखाँ गुन्डाजीको बालामा परेछ । ए रात्तै । बाल जति सप्पै यतै आएको रच र पो । नियम कानुन लाइ कसैले बाल नदिएको त । संगै यसको उपाय पनि निस्किएछ । अब त्यहा बाल रहेसम्म नियम कानुनलाइ बाल भएन त्यसैले अब ति बाल नमुठारी भएन भनेर प्रशासन कैची लिएर तम्सियो ।अनि भटाभट समात्त्दै मुण्डन गर्दै गर्न थाले ।
by Nepali Caricature at 18:060प्रतिकृया
विधा : चुल्ठे मुन्द्रे, लेख / ब्यङ्य, व्यङ्ग्य
काला बजारीको मुखमा ........!
by Nepali Caricature at 17:580प्रतिकृया
विधा : अपराध, आर्थिक कार्टून, खरोबार, सामाजिक कार्टून
कस्सम जालन्धर हैन
by Nepali Caricature at 17:550प्रतिकृया
विधा : सामाजिक कार्टून
अत्ति चै हैन ल ?
by Nepali Caricature at 17:450प्रतिकृया
विधा : चुल्ठे मुन्द्रे, राजनीतिक कार्टून, सामाजिक कार्टून
अमेरिकामा नेपालीको होड
by Nepali Caricature at 17:430प्रतिकृया
विधा : प्रवास
कमजोर आशाहरु |
2 साता अघिको
by Nepali Caricature at 17:410प्रतिकृया
विधा : खिलराज रेग्मी, पारस, राजनीतिक कार्टून
by Nepali Caricature at 17:390प्रतिकृया
विधा : झलनाथ, राजनीतिक कार्टून, सुसिल
Brett You are the foundation of my life You are the one from where I start and where I end. Without you in my life I amarose without ...
How much you meen to me
To claire........... I want you in my heart But you say it's never going to be I cant understand why we are apart Why cant you just...
my life admiring you
Kathryn, What went wrong babe? I have never loved like i love you and i will never love like this again. You make me smile, make me happy,...
i write ur name in the sky..
my sweet, i write ur name in the sand but the waves wash it away i write ur name in the sky but the wind blows it away i write ur name i...
Geoff I could tell you i love you every hour of everyday until we die, but that still wouldn't be enough. I could hold you forever in ...